Saamaynta taban ee U-joog Ku-joog U-joogta.Qalinka: Boobe Yuusuf Ducale. |
Saamaynta taban ee U-joog Ku-joog U-joogta.Qalinka: Boobe Yuusuf Ducale.
(Tabaha habaysan ee qaran-gadka)
“Wixii naga dhexayn jiray rag baa, Daahiroow dhamaye,
Dhubuq-dhubuqi waxay soo siddaa, dhabanno-haystaase,
Aabigaba dhirbaaxada naabsigu, waa mid aan dhixine,
Dhudhub oodan buu kula galaa, dheregga qaarkiiye,
Baarlamaankii dhaylaysan jiray, dheehii laga qaadye,
Ama rag aan u dhalan bay carriga, uga dhammaysteene,
Soomaali waxay dhaafsadeen, waan la dheygagaye”
Maansada Dhunkaal ee Timacadde, 1969kii
Qalinka: Boobe Yuusuf Ducale – cankaabo@hotmail.com, www.dharaaro.com
Bisinka iyo Yaasiinka……Tabaaragga iyo Tiirka Bir ah…….Waa maalmihii Alla-bariga ee aynu Ilaahay u noqonno oo cabsidiisa iyo cibaadadiisa ka magan gallo belaayada sow-sow leh. Ilaahayow na badbaadi aafooyinka meerayana naga samato-bixi. Idinkuna aammiinta igu dara. Ha samaato oo ha la helo dhaha.
Aan ku horreeyo Tuduca aan ka soo qaatay maansada Dhunkaal ee Timacadde. Wuxu tirinayaa maalmihii Inqilaabku ka dhacay dalkii Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed. Waa maansadiisii labaad ee uu tiriyo xilligaa Inqilaabka ee 1969kii. Timacadde maansdan wuxu kaga hadlayay aafadii ummadda ku habsatay iyo xanuunkii la soo mariyay. Wuxu ku soo goynayaa Tuducan aan soo qaatay meeriska ah:“Soomaalinnimadii waxay dhaafsadeen, baan la dheygagay.”
Timacadde, mid wuu fahmay, taas oo ah in berigaa iyo maalmahaas Soomaalinnimadii la iibsaday. Taas caad kama saarnayn oo sidii uu wedkiisa u hubay ayuu u hubay. Wuxu se la yaabbanaa oo uu qiimayn kari waayay dheygagna ku sheegay mas’uuliintii berigaa talinaysay, waxay dhaafsadeen ee ay siisteen Soomaalinnimadii. Markii uu labadii kefadood ee miisanka mid saaray Soomaalinnimadii, wuxu garan waayay ama waayayba wuxu saaro kefeddii kale oo u dhigma Soomaalinnimadii. Wuxu ka hadlayaa Xukuumaddii iyo Baarlamaankii beryahaa talada hayay ee horseedka u noqday in ay Siyaad Barre iyo saraakiishii milleterigu xukunkii dalka qori kula wareegaan, 21 sannadoodna ka amar-ku-taagleeyaan.
Tuducan Timacadde ee ku jiray Maansadaa Dhunkaal la-magac-baxday waxan u soo qaatay, waayahaas ayaad mooddaa in uu maantana aloosan yahay. Aniga oo aan maansyahankii qalin-daarayn isla markaana maanso kale ka dheegayn tiisa, ayaan is-idhi si aad waayahan maanta aloosan u sawirto, malaha halkaa uu Soomaalinnimadii ka yidhi ayuun baan ka dhigi lahaa Somalilandnimadii. Sidaas ayuu meerisku ku noqon lahaa:“Somalilandnimadii waxay dhaafsadeen, baan la dheygagay.” Waa waayaha maanta aloosan, markii aan la kaashaday aqoontayda gaaban, af-maalkii waddaniga ahaa ee Timacaddena raalli ha iga ahaado.
Intaasi, waa arar dadab-galkeedii iyo ballaysin gaaban oo aan qormadan koobnaan doonta ibo-fur uga dhigay.
Tan iyo xilliyo hore ayay dadka Soomaaliyeed guud ahaanba, gaar ahaanna reer Somaliland dibadaha u baxayeen iyaga oo raadinayay nolol dhaanta tan ay ku noolaayeen berigaa ama immikaba. Wixii xilliyadan immika ka horreeyay waxa loo bixi jiray ama loo dhoofi jiray si qof-qof ah oo aan sidaa loo dareemin. Wixii ka horreeyay xilliyadii ‘Kadeedkii’ Oktoobar ee Siyaad Barre dalka ka talinayay si aan muuqan oo ad u kooban ayaa loo dhoofi jiray. Dadkaa dibadaha xilliyadaa u bixi jiray waxa loo yaqaannay “Sea-man” ama Bad-mareenno inta badan dalalka Yurub tegi jiray, badaha adduunkana iskaga gooshi jiray. Dad aad u koobnaa oo nolosha ujeeddo ka lahaa ayay ahaayeen. Inta badan ugu danbeynta dalka ayay ku soo laaban jireen. Beryahaas dadkaas waxa la odhan jiray waa ay dhoofeen.
Xilliyadaa uu nidaamkii Siyad Barre dalka ka talin jiray, gaar ahaan 1974kii iyo xilliyadii ku dhawa ayay dadkii ugu badnaa dalkii Soomaaliya la odhan jiray ka baxeen, gaar ahaan reer woqooyigu. Sababta ugu weyni waxay ahayd cadaadiskii iyo duudsigii uu ku caan-baxay nidaamkii bahalka ahaa ee Siyaad Barre oo si gaar ah dadka qaarkii loogu bar-timaameedsanayay. Beryahana waxa la odhan jiray tacabbir oo inta badan dalalkan Khaliijka ayaa la tegi jiray oo laga soo xoogsan jiray. Dhibaatooyin badan oo ijtimaaciya ayaa ka dhashay oo noloshii qoysnimo ee mujtamaca saamayn taban ku yeeshay. Heesihii la qaadi jiray waxa ka mid ahaa: “Aniguna tusmaystoo, Qayrkay halkuu tegay, U-tabaabushaystee, I taageer Allahayow.” Axmed Mooge ayaa ku luuqayn jiray.
Dibad-baxii iyo qaxii ugu badnaa wuxu dhacayaa 1988kii oo ay sii xoogaysteen dagaalladii sokeeye, nidaamkii Siyaad Barrena ku tallabsaday burburintii habasnayd, badheedhka iyo ula-kaca ahayd ee magaalooyinkii waaweynaa. Dagaalladaa sokeeye dadyowgii dibadaha uga yaacay waxa la odhan jiray waa ay qaxeen ama qaxooti.
Dadkaasi markii ay dalalka reer-galbeedka tageen iyaga ayaa isu bixiyay caydh, lacagtiina la siinayayna ugu yeedhay caydha. Waxad mooddaaba in ay Hindidu ka magac fiicnayd, waayo iyagu lacagtaa waxayu yaqaanniin “free money.”
Xilliyadan danbe ee aynu joognana waxa casri noqday wax la yidhaahdo Tahriibka oo aynaan dhiilladaas oo kale hore u arag. Waa dhacdo naxdin iyo murugaba cokan oo qoysas badan taabatay, gaar ahaan hooyooyinka. Boqol boqol iyo kun kun ayay dhallinyaradii si badheedh ah oo aan tudhaale lahayn badaha isugu tuuraysaa, marka ay ka nabad galaan Saxaaraha iyo keymaha bahalo-galeenka ah ee dalalka qaarkood.
Mujtamaca noocyadaa iyo farahaas leh ee dibadaha ku nool ayaynu u naqaannaa maanta Qurbo-joog iyaguna sidaas isu yaqaanna. Waa inta dalka dibadihiisa ku nool ee ku dhaqan. Mujtamaca baaxaddaas lihi saamayn togan oo la yaab leh ayay ku lahaayeen halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta qaran, ilaa maantadaa aynu joognana ku leeyihiin dibudhiska iyo horumarka dalka. Ilaahay deeqdiisa ka-sokow iyaga ayaa ka mas’uul biilal badan oo lagu qaato dalkan gudihiisa. Kaalin la yaab leh waxa taakuleyntaa kaga jira haweenka oo u muuqda in ay ka dedaal iyo naf-hurba badan yihiin dhiggooda lab. Kuma aan samayn diraasad hufan oo aan go’aankan ku gaadho, bal se waa sida ay u badan tahay hadal-haynta dadku, weliba xilliyadan danbe. Qurbaha uun ma aha e’ xataa waayaha gudaha ka aloosan marka aad eegto dheddigga ayaa ka hadimo iyo hagardaamo yar dhiggooda lab. Mas’uuliyaddii hanashada qoysku maanta waxay u dheelliday dhinaca dheddigga oo gacanta ku haya nolosha inteeda badan. Sidaas ayaa lagu dhaqan yahay.